About Us - Wenzhou Weihang Plastic Co. Ltd
Zvinhu zvenaironi waya tai
Wenzhou Weihang Plastic Co., Ltd. ari nyanzvi mubasa zvinhu zvenaironi bhandi, Stainless simbi chisungo, chisungo ndiro chisungo, bead mhando, nhamba chubhu, mutopota, firimu, fastener, mbambo clip, hunyambiri simba chinja, hunyambiri simba otomatiki chinja chinja zvinhu R & D, kugadzirwa rokutengesa muna rimwe Enterprises. Uye kuti vagadze refu kugadzikana pamwe nehama dzinoverengeka retailers nevamiririri. The kambani hombe jekiseni Kuumbwa muchina, kavha michini, yepamusoro kugadzirwa michina, kuvhenekwa midziyo, simba zvekushandisa simba, zvigadzirwa vari aivigirwa kuna Europe, United States, kuMiddle East uye dzimwe nyika uye kumatunhu.
The kambani unyanzvi iri kugadzirwa zvinhu zvenaironi tepi uchishandisa tembiricha: -20 Celsius kuti +80 cant C (zvinhu zvenaironi 66). Tiine chichiitwa kuvandudzika kwemashoko achakwanisa kuita zvinhu zvenaironi ngaasungirire yakaderera tembiricha -40. With acid, alkali, nomurazvo retardant, mukurumari, kuputira nezvimwe zvakanaka. Products vari zvinowanzoshandiswa dzomunyika zvemagetsi fekitari, bundling TV, kombiyuta wire, chiedza, waya chisungo mutsetse, anogonawo kushandiswa mukati kushongedzwa, bindu tichisunga, chikepe wire rekambani Kuda kutamba, bhasikoro kana motokari chiputiriso bundling zvimwe zvinhu zvinogona kushandiswa zvokurima, horticulture, handicrafts nezvimwe mwanda zvinhu. The chigadzirwa ane hunhu kutsanya kunyorerana, kuputira zvakanaka, anozvidzora nokukiya, nyore kushandisa uye zvichingodaro. Iva vakawanda emakambani, mabhizimisi kutenga zvakafanana zvigadzirwa rwokusarudza, asiwo vazhinji muzvitoro apinde United States nedzimwe dzakabudirira.
Makambani vanobatisisa 'nenyika, uye mutengi takunda zvisamumirira "Bhizimisi uzivi, nguva dzose kuomerera" kukosha boka hwakanaka, mukuru kushanda zvakanaka uye pasi mutengo "mutengi vanofunga munyika yose, uye nesimba chokuwedzera mudzimba uye dzomunyika pamisika, akagadza rokutengesa nomumbure uye vatengi webasa hurongwa munyika, guta, zvigadzirwa vari aivigirwa kuna Southeast Asia, Europe uye United States nedzimwe nyika uye kumatunhu, musika mugove uye okutengesa kukura zvazvingava akaramba kumuka zvishoma nezvishoma, noushamwari zvitsva nezvitsaru vatengi kumba uye kunze vakasvika kushanyira uye kutaurirana mabhizimisi, kuti asike ramangwana riri nani!